tips Ukucoca - Ningbo BestCleaner Co., Ltd
Car Umshini Cleaner
Wire Umshini HTTPComment
BVC Cleaner uncedo uphethe zeBBQ iqela ngaphandle ukoyika imisebenzi ecocekileyo.
Wena ube elininzi nabahlobo kwaye ufuna kubamangalisa, kutheni abamangali ngokuthi iququzelele BBQ ipati? Musa ukuvumela indlu yakho mdaka ukufumana endleleni lokufumana ixesha zakho nabanye abahlobo abalungileyo. Apha sisicwangciso 5 inyathelo ukunceda ukucoca indlu yakho - akukho uxinezeleko, nje lula-to-ukufezekisa imisebenzi. Ngoko ukuqala phi? Kuba BBQ iqela, iindwendwe ziza ndichitha ixesha labo ngaphandle, ngoko ke kwiindawo ezininzi kubalulekile ukucoca kuloo ndlu emnyango, igumbi, ikhitshi kunye lokuhlambela ophilileyo. Akukho mfuneko ukucoca yonke indlu kodwa kugxininisa indlela kweqela - ingqalelo abaninzi abantu baya kuba neetafile, ezishelifini kunye neendawo ukuseta iziselo zabo.
1. Fresh & Declutter yokuhlala yakho.
Phambi kokuba uqale, vula i window ezimbalwa zokuvakalisa ukuphuma endlwini yakho inuka ezicocekileyo. Abasa ikhandlela anuka okanye sokutshiza indawo yakho deodoriser yongeza ezinye ngevumba kwaye icwangcisa meko. Okulandelayo lixesha kokuwiswa nabaphina iindawo endleleni iqela ngokugqithiseleyo onezinto. Ukufumana iindawo yethutyana ukubeka zonke izinto ezingeyomfuneko njenge ibhaskiti impahla okanye ibhokisi ukugcina ezi de umcimbi phezu ke izisombululo engcono elula.
2. Coca Gate wakho Door kunye Amangeno
Into yokuqala iindwendwe akho aya kubona na ekungeniseni ngoko ke kubalulekile ukuba babe nesimilo esihle kuqala. Yenza Cert ngokukhawuleza ngaphandle, ukubatshabalalisa na ukungcola. Yenza indlela yakho ngaphakathi uze wenze engacimekiyo malunga iholo lakho emnyango, esusa nayiphi clutter kunye nokubeka izihlangu, iibhatyi, iminqwazi kunye imeyile ebusweni. Uthuli iitafile okanye izinto zokuhombisa kwaye ukutshiza ezinye deodoriser.
3. Prepping Room Living
Qala ngokubeka up phandle na indawo izinto, eqondisa nezingqengqelo, ezintofontofo, kwentloko kunye refolding lilo (olukhulu ufihla naziphi na amabala - ke akuyi kuya kufuneka benze oku emva kokuba usebenzise nayiphi na imveliso BVC). Okulandelayo ekucoceni itafile, TV screen kunye nezinye iindawo enothuli ngokusebenzisa ilaphu microfiber. Ekugqibeleni, utshayela phezulu nayiphi uthuli okanye isilwanyana iinwele emgangathweni, kwaye musa ukulibala ukucoca iibhodi yakho ezigudle usebenzisa ongenawo lakho ibrashi okanye umbhobho attachment.
4.Clean i Kitchen
kwindawo yokuqala lokuhlasela ukuqala acoce kumgxobhozo kwakho naziphi na izitya ezimdaka; . Ukuba unayo njengesicocisi anike nje kubo siwabeka kwaye ziphakishe e Emva koko ke nika simba ukucoca elungileyo - kufuneka ibe engenabala, isitya zendalo xa kwenziwe - le cleaner BVC ngokuqinisekileyo uya kwenza lo msebenzi lula kakhulu! Okulandelayo ucoce tops yakho counter, bazipakishe zombane ezingeyomfuneko osule counter phantsi amanzi ikhitshi kunye nelaphu microfiber okanye usula ezilahlwayo. Unokwenza okufanayo isitovu sakho, nekhabhathi kunye efrijini. Inokuba kwakhona yi ngumbono omhle ukuba ukucoca enu angaphakathi efrijini, kulungiswe ngokutsha ukwenza igumbi appetisers, iziselo kunye nezinye okukhona. Ekugqibeleni, umphunga akorobhe phantsi ukuqinisekisa ikhitshi yakho spick kunye kweminwe.
5.Last kodwa inkoliso into ihlambulukile zegumbi Sanctuary
Ukushiya le igumbi ibaluleke kakhulu lokugqibela - igumbi lokuhlambela na igumbi kufuneka bajolise uninzi ingqalelo yakho. ntoni ke oku akuthethi ukuba kufuneka ukuba ufumane phantsi izandla zakho namadolo kunye ndazikhuhla emgangathweni, kodwa kunoko, ukucoca izinto iindwendwe ezininzi ziya kusebenzisa ngathi yangasese, esipilini, ukuthi xumbu kwayo, sokubala. Qala ngokupakisha zonke izinto izinto uwisile nekhabhathi okanye naphi na ebusweni, kulandele ngokunika isinki, usule kwaye lokumxelisa icocwe kakuhle nesicoci-ndawo seenjongo zonke okanye BVC Cleaner. Okulandelayo uqoqe yangasese - ngaphakathi, kwisihlalo, undi kunye ngaphandle, uze uqinisekise uyitshintshe roll yakho yangasese ekhoyo kunye enye entsha. Yongeza deodoriser ethile okanye ikhandlela anuka ukwenza loo mvakalelo Spa. Kwakhona musa ukulibala ukuba ukubeka iitawuli ezintsha, fresh kunye anoboya isandla ngaphandle. Ekugqibeleni, anike umgangatho lokuhlambela ukubhuqa ngomphunga elungileyo kwaye sonke uyenzileyo.
Oku kulula ukuba isicwangciso sethu 5 inyathelo - musa ukuvumela ukucoca ukungena endleleni ixesha lakho iqela PrEP.
Fumana iindaba zakutshanje, ingqokelela namaqhuzu kusiwa ngqo kwibhokisi yakho. Inquiry For Pricelist